Bannaanbaxyada Rabshadaha Wata ee Madawga oo Maraykanka Gilgilay iyo Aqalka Cad oo Muddo la Xidhay | Aftahan News
Bannaanbaxyada Rabshadaha Wata ee Madawga oo Maraykanka Gilgilay iyo Aqalka Cad oo Muddo la Xidhay
USA(aftahannews):- Dibadbaxayaal cadheysan iyo Booliska, ayaa isku dhacay magaalooyin badan oo ku yaalla Dalka Mareykanka, iyadoo ay sii koradhay carada ka dhalatay dilka nin madow ah oo aan hubeysneyn oo uu askeri ka tirsan booliska ku dilay magaalada Minneapolis.
BANNAANBAXYADA MADAWGA MARAYKANKA OO SII XOOGAYSTAY 2020
Guddoomiyaha gobolka Minnesota ayaa masiibada dilka George Floyd ku tilmaamay inay isu bedashay “kharbudaad si ula kac ah loo sameynaya” New York, Atlanta iyo deeganno kale ayay xasillooni darrada ku baahday iyadoo Aqalka Cad si ku meel gaar ah loo xiray markii dibadbaxayaal carreysan ay soo hor dhoobteen.
Ilaalada madaxweynaha ayaa xiray albaabada laga gala iyo kuwa laga baxa ee Aqalka Cad. Masuuliyiinta ayaa shaaca ka qaaday inay xilka ka qaadeen askeriga dilay ninka islamarkaana la xiray, dambi dil ahna si rasmi ah loogu soo oogay.
Trump muxuu ka yiri
Trump ayaa horay bartiisa Twitter-ka soo dhigay hadal dadka ka si careysiiyay kaas oo u muuqday inuu dhiiragelinaya qalalaasaha. “Hhaddi wax la dhaca, toogasha ayaa xigta” ayuu yiri Trump.
Dibadbaxayaasha ayaa qaadacay bandowga Jimcihii iyadoo gooba badan sida xarun boolis iyo gawaarida booliska dab la qabadsiiyay. Telefishinada ayaa sidoo kale baahinayay muuqaalo tusayay boob iyo dhac ka socda meelaha qaar.